Kai Po Che ( 2013 ) | MM Movie Store
ဒီကားလေးကတော့ IMDB 7.7 /10 ရရှိထားပွီး သဘာဝဆနျဆနျ ပွကှကျတို့နဲ့ အသိသညာ တဈခုကို ရငျဘတျထဲစှဲညှိစခေဲ့တဲ့ ဇာတျကားလေးပါ။ဇာတျလမျးအကဉျြး အီရှနျ၊ ဂိုဗငျ၊ အိုမီ တို့ဟာ ညီအဈကိုလိုခငျမငျကွတဲ့ သူငယျခငျြးတှပေေါ့။ အီရှနျကတော့ တဇှတျထိုးလုပျတတျပွီး ခရဈကတျကစားနညျးကို ကွိုကျနှဈသကျသူဖွဈပါတယျ။
ဒီလိုနဲ့ သူတို့သုံးယောကျဟာ ဘုရားကြောငျးအနီးမှာ အားကစားပစ်စညျးရောငျးဖို့ စီစဉျခဲ့ကွပါတယျ။ တကယျတမျး သူတို့အိပျမကျကတော့ မျောလျမှာ အားကစားဆိုငျကွီးဖှငျ့ခငျြကွတာပါ။ ဒါပမေဲ့ မတတျနိုငျသေးတဲ့ အစမှာတော့ အိုမီဦးလေးဆီက ပိုကျဆံနဲ့ပဲ ဆိုငျငယျလေးကို အစပြိုးခဲ့တယျ။
ခရဈကတျကို ရူးသှပျလှနျးသူ အီရှနျကတော့ နညျးပွအဖွဈလညျး ခရဈကတျကစားသူ ကလေးတှကေို လမျးညှနျပွပေးခဲ့တယျ။တဈနမှေ့ာတော့ အရမျးတျောတဲ့ ကလေးတဈယောကျကို အီရှနျ တှခေဲ့တယျ။ သူ့နာမညျက အလီ။ အဲဒီနောကျမှာတော့ အီရှနျဟာ အလီကို ခရဈကတျခနျြပီယံ ဖွဈအောငျ မွတေောငျမွှောကျပေးခငျြခဲ့တယျ။
အီရှနျရဲ့ဆန်ဒတှကေို အိုမီနဲ့ ဂိုဗငျတို့ကလညျး ငှကွေေးအရ ကူညီပေးခဲ့ကွတယျ။ တဈနမှေ့ာ သူတို့မွို့လေးမှာ ငလငျြဘေး ခတျသှားတဲ့အခါမှာတော့ အခွအေနအေရပျရပျဟာ ပွောငျးလဲသှားကွပါတယျ။
ဆောကျလကျစ မျောလျလညျး ပွိုကပြွီး သူတို့မြှျောလငျ့ခကျြပွိုလုဆဲဆဲ အခြိနျမှာ အီရှနျက စုထားတဲ့ပိုကျဆံတှကေို အလီတို့အိမျပွုပွငျဖို့ ပေးလိုကျတဲ့အခါမှာတော့ —??? ကဲ ဘာတှဆေကျဖွဈလာမလဲ။ညီအဈကိုလို ခငျမငျခဲ့ကွတဲ့သူငယျခငျြးတဈတှကွေား ဘာတှဆေကျဖွဈလာမလဲ။
အီရှနျရဲ့မွတေောငျမွှောကျမှုတှကေရော အလီအတှကျ အရာထငျစခေဲ့မလား။ အစရှိတဲ့ စိတျလှုပျရှားစရာတှကေ ဇာတျရှိနျတကျလာစခေဲ့ပါတယျ။ ဒီဇာတျကားမှာတော့ အားကစားရဲ့အရေးပါမှုတှနေဲ့ ဆရာသမားဂုဏျရညျကိုပါ ဖျောကြူးထားပွီး ပေးဆပျမှု၊နားလညျမှုတှကွေားက လူသားတှကေို ပုံဖျောခွငျးတှကေလညျး သဘာဝကလြှနျးလှပါတယျ။
ဇာတျအေးလှနျးသျောလညျး ပေးခငျတဲ့ရသကိုပီပွငျလှနျးတာကွောငျ့ ကွညျ့သငျ့တဲ့ဇာတျကားဖွဈကွေောငျး ညှနျးဆိုလိုကျပါရစေ။
ဒီကားလေးကတော့ IMDB 7.7 /10 ရရှိထားပြီး သဘာဝဆန်ဆန် ပြကွက်တို့နဲ့ အသိသညာ တစ်ခုကို ရင်ဘတ်ထဲစွဲညှိစေခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါ။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း အီရှန်၊ ဂိုဗင်၊ အိုမီ တို့ဟာ ညီအစ်ကိုလိုခင်မင်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေပေါ့။ အီရှန်ကတော့ တဇွတ်ထိုးလုပ်တတ်ပြီး ခရစ်ကတ်ကစားနည်းကို ကြိုက်နှစ်သက်သူဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ သူတို့သုံးယောက်ဟာ ဘုရားကျောင်းအနီးမှာ အားကစားပစ္စည်းရောင်းဖို့ စီစဉ်ခဲ့ကြပါတယ်။ တကယ်တမ်း သူတို့အိပ်မက်ကတော့ မော်လ်မှာ အားကစားဆိုင်ကြီးဖွင့်ချင်ကြတာပါ။ ဒါပေမဲ့ မတတ်နိုင်သေးတဲ့ အစမှာတော့ အိုမီဦးလေးဆီက ပိုက်ဆံနဲ့ပဲ ဆိုင်ငယ်လေးကို အစပျိုးခဲ့တယ်။
ခရစ်ကတ်ကို ရူးသွပ်လွန်းသူ အီရှန်ကတော့ နည်းပြအဖြစ်လည်း ခရစ်ကတ်ကစားသူ ကလေးတွေကို လမ်းညွှန်ပြပေးခဲ့တယ်။တစ်နေ့မှာတော့ အရမ်းတော်တဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ကို အီရှန် တွေ့ခဲ့တယ်။ သူ့နာမည်က အလီ။ အဲဒီနောက်မှာတော့ အီရှန်ဟာ အလီကို ခရစ်ကတ်ချန်ပီယံ ဖြစ်အောင် မြေတောင်မြှောက်ပေးချင်ခဲ့တယ်။
အီရှန်ရဲ့ဆန္ဒတွေကို အိုမီနဲ့ ဂိုဗင်တို့ကလည်း ငွေကြေးအရ ကူညီပေးခဲ့ကြတယ်။ တစ်နေ့မှာ သူတို့မြို့လေးမှာ ငလျင်ဘေး ခတ်သွားတဲ့အခါမှာတော့ အခြေအနေအရပ်ရပ်ဟာ ပြောင်းလဲသွားကြပါတယ်။
ဆောက်လက်စ မော်လ်လည်း ပြိုကျပြီး သူတို့မျှော်လင့်ချက်ပြိုလုဆဲဆဲ အချိန်မှာ အီရှန်က စုထားတဲ့ပိုက်ဆံတွေကို အလီတို့အိမ်ပြုပြင်ဖို့ ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ —??? ကဲ ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲ။ညီအစ်ကိုလို ခင်မင်ခဲ့ကြတဲ့သူငယ်ချင်းတစ်တွေကြား ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲ။
အီရှန်ရဲ့မြေတောင်မြှောက်မှုတွေကရော အလီအတွက် အရာထင်စေခဲ့မလား။ အစရှိတဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေက ဇာတ်ရှိန်တက်လာစေခဲ့ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ အားကစားရဲ့အရေးပါမှုတွေနဲ့ ဆရာသမားဂုဏ်ရည်ကိုပါ ဖော်ကျူးထားပြီး ပေးဆပ်မှု၊နားလည်မှုတွေကြားက လူသားတွေကို ပုံဖော်ခြင်းတွေကလည်း သဘာဝကျလွန်းလှပါတယ်။
ဇာတ်အေးလွန်းသော်လည်း ပေးခင်တဲ့ရသကိုပီပြင်လွန်းတာကြောင့် ကြည့်သင့်တဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ကြောင်း ညွှန်းဆိုလိုက်ပါရစေ။
Last Erotic Train – Link 2
The Unholy (2021) – Link 2
Merlin Season2(Episode 10)